Yuzhnyy Ural idume yimvelo olunothile futhi umfula zawo ezimangalisayo, sizungezwe emaweni anezinguzunga zamadwala, libanakekele ekhethekile. indaba namuhla Zethu - umfula omuhle i-Ayi, "Moonlight Nobuhle" (okuyinto kanjani igama ihumusha ezivela olimini Bashkir).
Manje, Ai River kuvela phakathi lamagquma Urals Southern - ku emthambekeni Elaudy e cranberry bog endaweni engamamitha ayi-700 ngaphezu kogu lolwandle, budebuduze Zlatoust.
It kungenziwa ihlukaniswe yaba izingxenye ezimbili: entabeni - emthonjeni baya emzini we-Laclos, futhi plain - kusukela Laclos emlonyeni. Hay River ageleza ku Ufa.
Inani obuphelele - mayelana 540 amakhilomitha, isigamu zazo Hay River ageleza kule Chelyabinsk esifundeni, kanti enye ingxenye - I-Republic of Bashkortostan. ukujula esijwayelekile - 1 imitha kuphela.
nemingenela yayo esemqoka - emifuleni Ik, Kigi, Melekes, Kusa, Lemaz, Arsha futhi Big Big Satka. Nokho ukudla kwabo okuyisisekelo elamukelayo lusuka snowmelt.
Hay River ngenxa yezizathu ezithile ongaziwa, njalo enodaka. Mhlawumbe le nkinga ingaxazululwa ixhaphozi yayo imvelaphi noma uhlobo olukhethekile inhlabathi ugu.
Esinye isici esithakazelisayo - ushintsho kaningi izinga lamanzi. Ngakho, ngo-kakhulu ukushisa emfuleni engajulile kakhulu, futhi uma lina ezingeni layo ngokushesha liyaphuma, amanzi kanjalo iba esinamafu ngaphezulu.
Of Ai emfuleni kude
Fans of emidlalweni eyingozi ngokuqinisekile uyakwazisa lokhu adventure ongenakulibaleka - Rafting ku Rapids lentaba eziyingozi, ukubukwa emangalisa ugu, amawa nasezintabeni nasemihumeni, okuzokwenza ukuhlangabezana endleleni. By the way, phakathi Ai kukhona 38 emigedeni esiyingqayizivele, futhi elalidume kunawo wonke zazo kubhekwe Laklinskaya futhi Kurgazanskaya.
Enye Luhambo - Karst Triomphe - imitha-15 rock onqenqemeni ibhange kwesokudla lomfula eduze nedolobhana okusha Quay. Ososayensi bakholelwa ukuthi leli yilona lonke emhumeni endala kakhulu, elabhujiswa ngo amanzi kanye nesikhathi.
Hay River - liphinde umhlangano esidlule, akumangalisi lapha bathambekele abavubukuli emhlabeni wonke. Ibhange kwesokudla is ngokoqobo ngithuka izikhumbuzo zomlando ahlukahlukene. Ngokwesibonelo, amakhilomitha ambalwa ukusuka edolobhaneni iyona edume Vanyashkino "Korotaevsky Stone", okuyinto kungabonwa hieroglyphs lasendulo - isithombe ilanga zibalekela abantu nezilwane.
Fans of izintaba, futhi uzothola into ukukwenza. Indawo ethandwa kakhulu phakathi kwawo - eweni imitha-80-okusezingeni eliphezulu "umunwe kaDeveli", a emaweni futhi kuyingozi kakhulu. Itholakala ikhilomitha elilodwa emzaneni Petropavlovsk.
Ukudoba eMfuleni Ai
Rafting emfuleni, ungakwazi jabulisa ngokwakho ukudoba ezinhle. Lihlala Pike, chub, ongenathemba, minnows, perch, okungenani - Zherikhov.
Futhi Hay River idume izinhlanzi esiyingqayizivele - Grayling, okuyinto ikuphi esifundeni esise-Ural ngeke ukubamba. Lolu hlobo akuvamile ngenxa yesimo esibi iminyaka ezomile.
Ukukhiqizwa eyinhloko abadobi - chubs encane nesisindo a kilogram. Futhi ungakwazi ukubamba okuthile okukhulu, kodwa udinga uzizamele lolo nendlela lokudoba.
Fish e Ae njalo ayahamba, kunzima ukukhetha endaweni ehlala njalo yokudla yimpumelelo. Kuqondane ukuthi ngelinye ilanga kuletha kokubamba izinhlanzi eziningi, futhi ngakolunye endaweni efanayo ungahlala ngezandla angenalutho.
Spinning obuswa perch, chub, chub, bese ukuntanta kahle Peck perch futhi Grayling.
Yini ukuletha ukusuka eMontenegro njengoba isikhumbuzo?
"Ash" (ngwenya). ngwenya yezinhloso eziningi enuzi Project 885 "Ash"
Laser kwesitho sangasese Rejuvenation: incazelo inqubo, izici kanye nokubuyekeza
Ngasiphi yobudala anganikeza ingane utamatisi? Ungadliwa utamatisi izitsha la karapuzov
Indlela ukwandisa amathuba akho okuwina at roulette
Biography Fedorovoy Oksany. Umkhaya, izingane kanye Oksany Fedorovoy